ကိုယ်ချင်းစာတရား – နံပါတ် (၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Short Story » ကိုယ်ချင်းစာတရား – နံပါတ် (၁)	11
ကိုယ်ချင်းစာတရား – နံပါတ် (၁)
Posted by အောင် မိုးသူ on Apr 24, 2015 in Short Story | 11 comments
၂၀၁၅ ၊ ဧပြီ ၂၃ရက် ၊ ကြာသပတေးနေ့
ညနေ (၆)နာရီ (၃၀)မိနစ်
နေ့တိုင်းလေး ဒီလိုလေးဆို ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ…..
အတွေးက ဖျတ်ကနဲ ဖျတ်ကနဲ ဖျတ်ကနဲ
တစ်ဖက်က ခေါင်မိုးမလုံတဲ့ မိသားစုတွေကတော့……….။
Mike says: .၂၀၁၅ ၊ ဧပြီ ၂၃ရက် ၊ သောကြာနေ့
.ကြာသပတေးပါ ဆြာရယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12395
ခင်ဇော် says: မနက်က ဘေးတိုက်မှာ Hacking လုပ်သံ ဆူညံနေလို့ စိတ်မကြည် ရင်းက တွေးလိုက်မိတာ…..
စစ်ပွဲထဲက အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေ။
Mr. MarGa says: မြင်ကွင်းထဲကို သိပ်ဝင်မလာတတ်တဲ့ အမှောင်ခြမ်းဘက်ကို သွားကြည့်လိုက်တိုင်း
ဒါတွေအတွက်ရော ဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲ…. ဆိုတဲ့အတွေး ခဏခဏထွက်တယ်
(အထင်မကြီးနဲ့ အတွေးပဲထွက်တာ ကျန်တာ ဘာမှ မထွက်ဘူး )
naywoon ni says: အုမာဃ ​တောင်​ အ​တွေး ပဲရှိတာလား ကျန်​တဲ့သူ​တွေ ဆိုဘယ်​လိုလုပ်​မလဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: ဟုတ်လည်း ဟုတ်ပေတာပဲ
uncle gyi says: ဘာပြောပြောစာနာစိတ်ရှိတယ်ဆို
Alinn Z says: .ခေါင်းမိုးမလုံတာထက် အဆရာချီဆိုးတဲ့ ဘဝတွေ ရှိသေးတယ်. . .
အောင် မိုးသူ says: ဟုတ်တယ် အဲ့လိုကျတော့်လည်း စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်လည်ဖေးမမိပါရဲ့။
မြစပဲရိုး says: ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ရှိတာကောင်းပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ နေရာတိုင်း ကိုတော့ ကိုယ်ချင်းစာလို့ ရမယ် မထင်ပါ မောင်အောင် ရေ။
ဘယ်လိုမျိုးလို့ မင်း ထင်သလဲ? Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 565
lu lu says: တချို့ အရာတွေက ကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ဖူး မှ
အောင် မိုးသူ says: ဟုတ်တယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အချို့လူတွေဟာ သိသိကြီးနဲ့လည်း သူတစ်ပါးအပေါ်မကောင်းကြံတတ်ကြတယ်။